2 Igumbi lokulala 1wc SHP Khanh Phong Ifulethi
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Cẩm Tú
U-Cẩm Tú unokuphawula okungu-31 kwezinye izindawo.
Ifulethi liyi-59.5m ububanzi elinamagumbi okulala ama-2 ahlukene, i-1 wc enekhabethe lokugeza, leli fulethi litholakala esakhiweni esinezitezi ezingama-28. Enkabeni yedolobha, ukuhamba kwemizuzu engu-11, maqondana nenkundla yezemidlalo i-Lach Tray, ama-200m ukusuka e-Youth Cultural House. Izungezwe izipesheli eziningi zeDolobha lase-Hai Phong.
Itholakala eduze kwehhotela lezinkanyezi ezi-5 i-Mercure, kukhona indawo yokudlela yase-Eurasian esitezi sesi-6, kanye nedamu lokubhukuda esitezi esingu-28, eline-Skybar ewubukhazikhazi nesezingeni eliphezulu.
Eduze kwe-Youth Culture House, i-Lach Tray Stadium, kanye ne-Mercure's 28 Sky Bar
Itholakala maphakathi nedolobha, eduze nomgwaqo ukuze uye kalula ezifundeni.
Ibungazwe ngu-Cẩm Tú
Izivakashi zinendawo yazo
UCẩm Tú Ungumbungazi ovelele